Maleeshiyaad Al Shabaab kamid ahaa oo isku soo dhiibay Ciidanka Xoogga ee gobolka Gado – Radio Muqdisho
Maleeshiyaad Al Shabaab kamid ahaa oo isku soo dhiibay Ciidanka Xoogga ee gobolka Gado
Guuliye Xareed Muxumed iyo Cabdale Naasiri Ibraahim oo ka tirsaa Kooxda Nabadiidka Al Shabaab ayaa isku soo dhiibay Ciidanka Xoogga dalka qaybtooda ku sugan gobolka Gado gaar ahaan magaalada Garbahaareey.
Labadaan nin ayaa muddo kamid ahaa Argagaxisada Al Shabaab iyagoo sheegay in mudadaas dhibaato badan u gaysteen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dagan gobolka Gado oo iyagu u qaabilsanaayeen Kooxda Al Shabaab.
Saraakiisha Ciidanka Xoogga dalka ee jooga Garbahaareey ayaa sheegay in ragaas xiriir lasoo sameeyeen markii dambana gacantooda soo galeen iyaga oo Hubkoodii wata.
Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in loo gudbin doono laamaha kale oo ku shaqada leh kuwa midka ahaa Argagaxisada ee isa soo dhiiba sidda Maxkamadda Ciidanka Qalabka sidda.
Bilooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhiyey Maleeshiyaadka iyo Horjoogayaasha Argagaxisadda kamid ahaa oo isku soo dhibaayey Ciidanka qalabka sidda kadib markii u adkeysan waayeen howlgaladda Ciidanka ka sameynayaan deegaanadda ay dadka ku dhibaateen.
Gobolka Mudug waxaa ka bilowday Qorshe deegaameyn loogu sameeynayo dadka danyarta ah